Izingcweti zeSemalt Zethula Izindlela Zokuhlaziya Ukusebenza Kwakho ku-Google Search Console
Uzama ukufinyelela i-TOP, kepha awukwazi? Amakhasimende awakwazi ukuthola isayithi lakho? Hlola, uhlaziye futhi uthole impendulo usebenzisa amathuluzi wokuhlaziya weWebhu WAMAHHALA we-Semalt . Ithuluzi lethu lokubheka ukubekwa kwegama elingukhiye linikeza ukubekwa kwamasayithi kumakhasi emiphumela yenjini yokusesha ye-Google futhi lisikisela amagama angukhiye wokuphakanyiswa okuhlosiwe.
Thola ukuthi abantu bafunani bese ubatshela ukuthi badinga ini. Hlola amazinga ezitha zakho, uveze imfihlo yempumelelo yazo futhi usebenzise lolu lwazi olusha ngokukhuthaza kwakho ku-inthanethi. Khiqiza imibiko enemininingwane emaphutheni alungisiwe namazinga athuthukisiwe wokuhlaziywa lapho uwudinga. Yiba yi-guru guru lewebhu wenze inhlanhla ngesiza sakho.
Sebenzisa ithuluzi leSemalt ukuhlola ukuma kwamagama angukhiye kanye neWebhusayithi Analyser ukulandela umkhambiso:
Hlola ukwakhiwa kwesayithi lakho
Vula ukubonakala kwayo kuwebhu
Hlola amasayithi ancintisanayo
Khomba amaphutha wokusebenzisa kahle ikhasi ngalinye
Thola imibiko yokucaciswa kwewebhusayithi okunemininingwane
Ama-analytics ethu wewebhu amathuluzi okuhlaziya ochwepheshe be-webmasters abavula umnyango wamathuba amasha wokuqapha imakethe, izikhundla zakho nalezo zalabo oncintisana nabo kanye nokuhlaziywa kwebhizinisi okuqondakalayo.
Ukulawulwa kwezikhundla zesayithi lakho
Ukuthola ukuma okuhle ku-Google sekuphenduke inkundla yokulwa yokuthengisa online. Yilapho ingxenye enkulu yesu lakho le-inthanethi kufanele liqondiswe khona. Ngakho-ke, kubalulekile ukubheka intuthuko noma ukwehluleka kwakho.
Ikuvumela ukuthi uthole isithombe esiphelele sokuthi inkampani yakho ime kuphi emakethe. Le datha yokuhlaziya ikusiza ukuthi uqokomise amaphuzu asemqoka emisebenzini yakho yesikhathi esizayo: gcwalisa isayithi lakho nokuqukethwe okususelwa kumagama angukhiye afanele, thenga / shintshanisa izixhumanisi ngokusho kwamagama angukhiye ahambisanayo, njll.
Lawula isikhundla sabaqhudelana bakho
Uphenyo olunzulu kanye nokuhlaziywa kwezincintisana zakho yizinto ezibaluleke kakhulu zokuhlaziywa kwemakethe okuphelele. Ukuhlaziywa kokuncintisana kukuvumela ukuthi uhlole amandla nobuthakathaka bezimbangi zakho emakethe yakho futhi usebenzise amasu asebenzayo wokuthuthukisa inzuzo yakho yokuncintisana.
USemalt uzokuhola ngenqubo yokuhlaziya yokuncintisana yezinyathelo ngezinyathelo, kukusiza ekuboneni izimbangi zakho, ukunquma nokukala izimfanelo zabo, ukuhlola amandla abo nobuthakathaka babo, bese uthola izinhloso zabo namasu esigabeni sakho semakethe.
AmaSemalt Analytics azokwembula yonke imininingwane yokuthi izimbangi zakho zimi kuphi emakethe. Ukusebenzisa lolu lwazi ngempumelelo kuzokuvumela ukuthi uqeqetshwe ekusetshenzisweni kwezinjini zokucinga, zokuphromotha nezokukhangisa.
Ukutholwa kwezimakethe ezintsha
Ukuba nesu lokuqina lokuthola kwamakhasimende nokutholakala kwezimakethe ezintsha kuyinto ebalulekile kunoma iyiphi inkampani. Ngaphandle kwayo, uzoba nesikhathi esinzima sokukhulisa ibhizinisi lakho ngendlela enenjongo. Lokho kusho, enye yezingqinamba eziyinselele kakhulu yokwakha ibhizinisi ukuthola isiteshi esizinzile kunazo zonke sokuheha izimakethe ezintsha.
Imininingwane etholakala kusukela ekuhlaziyweni kwebhizinisi lakho inikeza amathuba amasha okusatshalaliswa kwempahla nezinsizakalo kanye nokwenziwa komkhiqizo wakho emazweni achaziwe, ngaleyo ndlela kunikeze inkampani yakho ukuthi icabangele izici ezihlobene nezifunda, njll.
Ukuguqulwa kwedatha ku-PDF ne-Excel
Ukubaluleka kwalo msebenzi ngeke kubukelwe phansi lapho kwethulwa kumakhasimende nakubaphathi. Unethuba eliyingqayizivele lokudala imibiko enelebula elimhlophe futhi uyithumele kumaqembu esithathu ngaphansi komkhiqizo wakho.
Ama-Semalt analytics afaka
Amagama abalulekile aphakanyisiwe
Sikusiza ukuthi ukhethe amagama afanelekile wokuhweba.
Asisekho isidingo sethuluzi lokusesha elingukhiye. Thatha amagama abancintisana bakho, imininingwane ejulile nge-PPC ne-SEO, idatha yeGoogle nobuchwepheshe bethu bokucinga. Ukuphela kokufanele ukwenze ukushiya abaphathi kochwepheshe beSemalt.
Zibone ngeso lengqondo futhi uhlaziye isikhundla samagama akho angukhiye ngokwesikhathi. Ukuhlaziywa kwesikhundla segama elingukhiye kuyinqubo yocwaningo kanye nokuhlaziywa kwamagama wangempela okusesha abangena kwi-inthanethi ezinjini zokucinga.
Imininingwane ongayithola mayelana nalawa magama wangempela wokusesha angasiza ukwazisa isu lakho lokuqukethwe, kanye necebo lakho elibanzi lokumaketha.
Kungani ucwaningo lwegama elingukhiye lubalulekile?
Kaningi, sizwa ukuthi i-SEO ivele kanjani eminyakeni eyishumi edlule, nokuthi amagama angukhiye uqobo asephenduke kanjani amandla ethu wokuma kahle kusesho olwenziwa ngabantu nsuku zonke.
Ukuqashwa kwansuku zonke kwezikhundla zesayithi lakho ohlelweni lwenjini yokusesha.
Ukucwaninga nokuhlaziywa kwendawo yakho yokuncintisana yokusesha yezimbangi zakho.
Ukulawulwa komkhiqizo wakho
Isimo somkhiqizo wakho sibaluleke kakhulu, ngoba ama-77% wamathemba azokufuna ngokuzimele.
Yigama elethusayo lomqondo olula. Umkhiqizo wakho ungobuso benkampani yakho. Dlala ngalo, futhi abantu bangaba nenkinga yokukubona. Gcina ingaguquguquki, futhi maduze uzokwakha idumela elihle.
Futhi ukulawula ubunikazi bakho bebhizinisi akukuhle kuphela kumakhasimende akho. Kwenziwe kahle, ukulawulwa komkhiqizo kungonga isikhathi esiningi, ingasaphathwa ingcindezi.
Le mininingwane yokuhlaziya ikhombisa isilinganiso sakho sokuthandwa, ikuvumela ukuthi wakhe inqubomgomo yokubambisana efanelekayo.
Ukuhlaziywa okuphelele kokuhambisana kwesayithi lakho ngokuthuthukiswa kwesiza nezidingo zomkhakha we-SEO.
Ukuhlolwa kwe-SEO kwe-inthanethi | Ukuhlaziywa kwe-SEO
Izinjini zokucinga zisebenzisa izici eziningana ukukala iwebhusayithi. I-Website Analyser iyithuluzi lokuhlola i-SEO elihlola lezi zinto kanye nokunye. Kukusiza ekutholeni izinkinga ezingase ziphazamise izinga lesayithi lakho. Ngokwenza ukuhlola okuningiliziwe kwesayithi le-SEO, ithuluzi lethu likunikeza ukubuka konke okuphelele kwemininingwane ye-SEO yesayithi lakho, njengamathegi we-Meta, ukubuka konke kwe-Google SERP, isemaps, iRobots.txt nezinye izibalo eziningi ezibalulekile.
Ukuhlaziywa Kwethrafikhi Yewebhusayithi | Isihloli Somgwaqo seWebhu
Kulesi sigaba sethuluzi lokuhlola iwebhusayithi, ungenza ukuhlaziya okuphelele kokugcwala kwewebhusayithi futhi uthole ukuthi simo sewebhusayithi yakho sisezingeni eliphezulu. Konke lokhu ngezinyathelo ezibalulekile njengezinga lokugoqa iwebhusayithi yakho. Ungasebenzisa lawa metrics wedatha ukuhlela amasu akho wewebhusayithi ngokuqhubekayo.
Ngemuva kokubhalisa kusayithi lethu, uqala inqubo yokuqoqwa kwedatha bese uthola umbiko oningiliziwe ngezikhundla zewebhusayithi yakho nalezo zalabo oncintisana nabo, kanye nokuhambisana nesayithi lakho ngokwakhiwa kwesiza namazinga embonini ye-SEO. Uma usuvele unayo i-akhawunti, ungahlala ungeza iphrojekthi entsha (iwebhusayithi) esikhaleni sakho, futhi kuzohlaziywa nohlelo.
Ngesikhathi sokuhlaziywa kwesiza sakho, uhlelo lwethu luhlongoza amagama angukhiye akhiqiza ukuthengisa nokuvakasha ngokusekelwe kokuqukethwe negama le-meta = '' amagama angukhiye '' atholakala ekuhlaziyweni kwewebhusayithi yakho. Ungangeza amagama akho angukhiye noma ususe amagama angukhiye akhona nganoma yisiphi isikhathi.
Isizinda ngasinye sikazwelonke esivumela ukusesha kwe-inthanethi ngolimi olukhethile kunikwa amandla izinjini zokusesha ze-Google ezingama-338. Zonke lezi zinjini zinquma izinga lesiza sakho eSemalt.
Kungakho uSemalt eluleka ukuthi kusetshenziswe izinjini eziningi zokucinga lapho kuhlaziywa isiza sakho. Ungakhetha izinjini eziningi zokucinga zokuhlaziya iwebhusayithi njengoba ufisa.
Nsuku zonke, sihlaziya isikhundla sendawo bese silandela inqubekela phambili yazo. Ngaphezu kwalokho, siqoqa imininingwane mayelana nalabo esincintisana nabo (uma unquma ukubheka amasayithi abo).
Ngokungafani namanye amasayithi, sibuyekeza njalo isikhundla sakho, esikunikeza ithuba eliyingqayizivele lokulandela isikhundla sesayithi lakho online nganoma isiphi isikhathi sosuku bese ubona izinguquko zakamuva.
Uthola ukuhlunga okuningi okuzokwenza umsebenzi wakho nedatha elula futhi kukusize wenze izinqumo zokuphumelela kwamaphrojekthi akho.
Ungahlukanisa amagama akho ukuze ubheke ingxenye ethile yebhizinisi lakho bese uthatha amanothi awusizo azokhonjiswa kuthuluzi le-infographic futhi axhumeke ngosuku oluthile.
Ungasebenzisa futhi uhlelo lwe-API. Kukhona izindlela ezimbalwa zokudlulisa imininingwane. Imodyuli esisetshenzisweni seqembu lesithathu ihamba phambili kubo. Okokugcina kulula kakhulu ngoba idatha ivumelaniswa ngokuzenzakalelayo, okuvumela abasebenzisi ukubuka imininingwane ebuyekeziwe. Awukho umzamo odingekayo. Ungahlala ubuka idatha yokuhlaziya esesikhathini kunoma yimuphi umthombo okhethiwe.
Konke ukucutshungulwa kwethulwe kuwe ngombiko wokuhlaziya onemininingwane eguqulwe ngefomethi yePDF noma i-CSV (White Label & Semalt Label) ongayikhipha kuwebhusayithi yethu.
Imibiko nayo ingathunyelwa kukheli le-imeyili eliveziwe, ngokuya ngemvamisa ekhethiwe. Lokhu kungaguqulela kangcono ekuboneni kwakho futhi kuveze amandla wentuthuko yakho kumuntu wesithathu.
Umphathi wakho uqobo unesibopho sokubheka intuthuko yakho futhi uyatholakala ngokubonisana noma imibuzo nganoma yisiphi isikhathi. Ungaxhumana nethimba lethu ngokulula kwakho.
QAPHELA: Uma umisa ukukhushulwa kwe-SEO, wonke ama-backlink azosuswa, futhi i-Google izoyikhipha ku-database yayo ezinyangeni ezimbalwa. Noma ngabe amazinga owafinyelela ngesikhathi somkhankaso we-SEO anciphisa kancane kancane, asazokwazi ukuphakama kunalawo owawunawo ngaphambili.
Uma uke waba nomnikazi wewebhusayithi noma wasebenza, kufanele wazi kakhulu ngegama elithi Ukucinga Injini Yokusesha (i-SEO) futhi uzwile noma usebenzise elinye lamathuluzi we-SEO. I-SEO ifaka amarobhothi e-Google afika kusiza sakho futhi akhasa ngawo ukuze afakwe inkomba. Futhi ngokususelwa kuma-algorithms ayo, uma i-Google ithola idatha yakho inembile futhi yenziwe kahle ngokwanele, iwebhusayithi yakho kungekudala izoba phezulu ku-Google. Nakhu ukuthi ama-analytics wewebhusayithi yeGoogle asebenza kanjani.
Abakhandi bahlola okuqukethwe kuwebhusayithi yakho bese beqopha imininingwane kwi-database yabo bese bebeka iwebhusayithi yakho ngemuva kokuyihlaziya.
Basebenzisa i-SEO ukunquma ukuthi uzothola malini e-web traffic nokuthi isayithi noma ijubane lekhasi liyini. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuqapha i-SEO yakho. Futhi yilokhu ithuluzi lethu lokuhlaziya iwebhusayithi kukusiza ukuba ukwenze.